Choqok waxaa loo aqoonsaday inuu yahay macmiilka ugu wanaagsan Twitter-ka ee Linux | Laga soo bilaabo Linux
Choqok waxaa loo aqoonsaday inuu yahay macmiilka ugu fiican Twitter ee Linux
Had iyo jeer waan isticmaali jiray choqoksi fudud maxaa yeelay waa Qt mana jecli inaan iskudaro dukaamada buugaagta GTK Naftayda KDE hadaan caawin karo. Waxay dhacdaa taas LifeHacker.com soo dhigay maqaal maanta ka hadlaya choqok, oo si gaar ah u barbar dhigaya macaamiisha kale Twitter loogu talagalay Linux, oo sheegaysa in tani ay tahay mid gacmaha hoos u dhigaysa kuwa ugu fiican all
Waxaan ku dhaafayaa turjumaada halkan:
In kasta oo ay jiraan tiro badan oo macaamiisha Twitter ah oo ka jira Linux, haddana midkoodna ma fiicna. Kuwa aan jecel nahay waxay noqon doonaan kuwa awood leh oo la beddeli karo choqok.
Ka eeg quudintaada Twitter e Idendi.ca, jawaabaha tooska ah, farriimaha tooska ah, iyo wax badan oo ka socda daaqad si caddaalad ah u kooban.
Waxay taageertaa xisaab badan.
Kuu ogolaanayaa inaad raadiso iyo sidoo kale inaad raacdo isticmaalayaasha kale.
Muujiya macluumaadka astaanta isticmaalaha.
Dib u qor, jawaab, iyo xulashada aad jeceshahay adigoo gujinaya guji fudud.
Waxay taageertaa liisaska Twitter
Taageero si loo soo gaabiyo URL-yada in ka badan 10 adeeg oo kala duwan.
Waxaad geyn kartaa sawirrada Flickr, ImageShack, Xikmad, Twitgoo, Sawir -gacmeed y Dib u buuq
Waxay ku dhex jirtaa ogeysiisyada KDE.
Waxaad ku dhejin kartaa qoraalka luqado kale sida choqok waad isticmaali kartaa Google turjubaan.
Ka shaandhee qoraalada aan loo baahnayn quudintaada.
Arag sawirada iyo fiidiyowyada.
Choqok waxay haysaa wax kasta oo aad ku rabto macaamiisha Twitter-ka. Waa mid iswaafaqsan, waxay taageertaa xisaabaadyo badan, waxayna taageertaa tanno gaagaabanyaal URL oo kala duwan, iwm. Tan waxaa lagu daray nidaam koronto oo ka kooban astaamo horumarsan sida shaandhaynta tweet-ka, muuqaalka iyo muuqaalka fiidiyowga, Taageerada Google Translate, iyo xitaa awoodda lagu soo bandhigo cinwaanno dhaadheer markii la dul wareegayo nooca soo gaabiyay. Waxay leedahay farabadan oo dookhyo kala duwan ah si ay ula qabsato dhaqankeeda, markaa waad arki kartaa oo isticmaali kartaa Twitter-ka sida aad rabto. Waxaa jira waxyaabo aad u yar oo aan rajeyneyno inaad sameysay.
Taasi waxay tiri, haddii aad dacwo qabto, waa inaad jeclaan lahayd inaad gab ka dhigto "tirinta tifaftirka cusub". Si kale haddii loo dhigo, lambarka waxaa lagu soo bandhigayaa tirada tweets-ka cusub ee tab kasta, oo ah lambar kaliya lagu saari karo adiga oo galaya tab kasta oo gujinaya badhanka "calaamadee dhammaan sida loo akhriyey". Waa inuu noqdaa sida macaamiisha kale Twitter, kaliya adoo galaya tab kasta wuxuu si toos ah u calaamadeeyaa dhammaan tweets-ka cusub ee tabta sida loo akhriyey. Tani waxay u badan tahay dhibsashada ugu yar ee aad ka fikiri karto in kastoo, sidaa darteed tani waa mid mudan in loo dulqaato choqok shaki la'aan waa barnaamij weyn. Faa'iido darrada kale ee ay leedahay waa inay tahay KDE, taas oo macnaheedu yahay inaan sida muuqata u arki doonno wax yar oo meesha ka baxsan nidaam ku dhisan GNOME, maahan in la yiraahdo ma taageerto lumin. Si kastaba ha noqotee, xitaa a GNOME, waxay baabi'isaa dhammaan macaamiisha halkaas ku jirta iyada oo la jaan qaadaya muuqaalkeeda.
Kadib wuxuu sameeyaa isbarbardhigyo Caliente Caliente, Gwibber y BurburintaTwitter, oo aanan tarjumi doonin inta badan si looga fogaado isku dhacyada haha, fikraddu maahan inaan sameeyo a Choqok VS ______ ????
Horaan uga hadalnay choqokMarkii uu soo baxay nooca 1.2 waxaan qoray maqaal, oo ay ku jiraan sawirro iyo dhammaan wararkii na keenay, waxaad ka akhrisan kartaa halkan: Choqok 1.2 oo la sii daayay [Sawirro + Faahfaahin + Download]
Tani sida cad maahan runta dhabta ah, qof walbaa wuxuu ku cabirayaa fikirkiisa laakiin ... intee in le'eg oo kuwa fikrad ka duwan qaba ayaa dhab ahaantii isticmaalay Choqok? 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Choqok waxaa loo aqoonsaday inuu yahay macmiilka ugu fiican Twitter ee Linux
Ma lihi wax taban oo aan idhaahdo. Choqok, sida KDE, waa heer sare .. Waxaan rajeynayaa nooca cusub ee Turpial uu maareeyo si uu ula qabsado.
Waa inaan ka faallaynaa faallooyinkaan ilmahii hore
Uma baahnid inaad wax dhigto. Sababtoo ah waxaan doorbidaa Xfce macnaheedu maahan inaan aqoonsanayn in KDE uu yahay kan ugu fiican GNU / Linux Desktop waligeyna waan dhihi jiray.
Had iyo jeer waxaad dhahdaa isla carcamal hahaha
Waxaa laga yaabaa in la yiraahdo tan ugu fiican waxay dhaawaceysaa qaar, waxaan u maleynayaa inay sax noqon laheyd in la yiraahdo waa tan ugu dhameystiran. Hagaag, "kafiican" wax badan baa ku xidhan dhadhanka mid walba 😉
Waxaa jira waxyaabo ka fiican kuwa kale
Guud ahaan, adigoon ku dhegin Linux
Choqok waa mid heer sare ah, wuxuuna gacanta ku hayaa barnaamijka ugu wanaagsan ee microblogging-ka maanta.
Waxay ahayd inaan ka tago Twitter waqti dheer ka hor feker ahaanteyda waxaan ku faraxsanahay Hotot ku saabsan Choqok, taas oo iyaduna ma xuma. Dhankeyga, waxaan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso dhammaan macaamiisha oo aad go'aansato ra'yigaaga, salaan.
Hotot waa wanaagsan yahay, waxay ku dhowdahay inay lasocoto isla astaamaha choqok ee kor lagu muujiyey, laakiin ma taageerto liisaska, ma lahan wax gaagaaban oo aad u fara badan, in kasta oo koonto kasta ay ku socoto tusaale ahaan, ma garanayo sida koontadayda badan ugu jirto choqok, laakiin waan jeclahay Hotot 😉
Sirta Google iyo Facebook
Sii Firefox muuqaalka Opera ee leh FXOpera